I-Data Science Certification Course eNdiya | Kutheni iScience Data? «ITS
I-Data Science Certification Course eNdiya | Kutheni iScience Data?
Yintoni i-Data Science Course?
Ukuxubusha ngenkathi ukhetha iNkqubo yeNzululwazi yeDatha
Inkcazo yesayensi yeNkalo eNdiya
Imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo ukufunda:
Apho ufunde khona:
Inzululwazi eqhutywe ngedatha ngumqeqeshi oquka iindlela zobuchule kunye nenkqubo yokukhupha ulwazi oluxabisekileyo kwiinkcukacha. Olu lwazi olukhishwe luyakhiwa okanye lulungiswe. Kukho izifundo ezahlukeneyo ezihamba phantsi kweNzululwazi yeDatha. Sinike ithuba lokubona indlela yokukhetha inkambo efanelekile kuwe.
Qaphela iinjongo zakho: Ngaphambi kokukhetha ikhosi, unokuqonda ngokucacileyo kweenjongo zakho okanye ngaba kuya kufuneka ukuba ufunde. Inzululwazi yolwazi ineendawo ezininzi zoxinaniso kwaye kufuneka ukhethe lowo unomnqweno. Inkqubo ofuna ukuyijoyina kufuneka ikuncede uqonde iinjongo zakho njengomntu. Akukho mntu kodwa oku kunokukunyusela inyathelo lokuphumelela kwingingqi yakho ekhethiweyo.
Unokukhetha ezimbini iindlela zokufunda. Omnye uhlukaniso uqaphela apho kufuneka uhlawule imali encinane kwaye omnye ujoyina iikholeji ezinkulu ngefowuni efanelekileyo. Kwiimeko zokufunda ngokwakho, ufuna ukuphefumlela okuphezulu ukugqiba ikhosi ngelixa iikholeji zineengcali zokukukhokela. Unokukhetha njengokuba kuboniswe yinqanaba lakho loxolo.
Ingaba ukhethe ukufunda okusekelwe kwiwebhu okanye ukujoyina ikholeji, ukukhetha umbutho ochanekileyo kuyimfuneko ekuphuhliseni kwakho. Unokubongoza iingcamango ezivela kubahlobo abaye bathatha ngokusemthethweni ikhosi. Ngethuba lokuba ujoyina ikhosi eqhelekileyo, kuqala khetha apho kufuneka ukuba indawo leyo ibe khona. Kwimeko apho ungacacanga malunga nayiphi na inkcazo yesayensi yeIndiya, ungakhetha enye yeekholeji ezilungileyo ngaphandle kwesizwe. IziCwangciso zeNkcazo zeNnovative Unika uQeqesho loQoqosho kunye noQeqesho lwaBantu baseGurgaon, Delhi, Banglore, Noida, eIndiya nakwamanye amazwe afana ne-USA, i-UK ne-Australia.
Indoda enqwenela ukuthatha ikhosi iqhelekile ngokumalunga nemilinganiselo eninzi yezinto. Utshintshiswano olungentla lukunceda ukuba ukhethe kwiziko lesitifiketi sezesayensi ozilungeleyo.
Indlela Yokuba YiNzululwazi Yengcali Iingcali eziqinisekisiweyo?